Is degeen | Refugee Center Online | Refugee Center Online
Baabuur wadista iyo gaadiidka
Marka ugu horaysa ee aad timaado ee dalka Mareykanka, waxaad yeelan doontaa in ay bartaan sida loo qaato baska ama gaadiidka dadweynaha. Si aad baabuur ee dalka Mareykanka, waa inaad haysataa liisanka baabuur iyo caymiska gaariga lagu wado. Akhri wax dheeraad ah
Guryaha iyo guryaha
Baro sida loo helo guri dabaq ah. Marka aad kiraysato guri dabaq ah, waxaad u baahan doontaa inaad saxiixdo warqad iyo ku heshiiyaan in ay bixiyaan kirada bil kasta. Akhri wax dheeraad ah
Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan dukaamada ee dalka Mareykanka. dukaamada qaar ka mid ah ay yihiin run ahaantii weyn iyo qaar ka mid ah ay yihiin kuwo yar. Waxa kale oo aad ka iibsan kartaa wax badan oo online. Akhri wax dheeraad ah
Baro sida loo noqon ammaan ee dalka Mareykanka. Baro sida loo ilaaliyo naftaada iyo qoyskaaga. In Maraykanka, booliska kaa caawin doona inaad amaan. Akhri wax dheeraad ah
Computers iyo warbaahinta bulshada
In Maraykanka, waxaad isticmaali doonaa computer ah muddo ku dhow wax walba oo. Waxaad isticmaali doonaa computer ama telefoon smart inay la xiriiraan, si aad u hesho shaqo, inaad wax ka barato, oo ay aad u ballamaha. Akhri wax dheeraad ah
Raadi xarun sare iyo macluumaad waayeelladoodii
Ma waxaad tahay qof waddanka u soo guurey da 'ah ama qaxootiga? Ma leedahay waayeel ah ee qoyskaaga? Baro ilaha dhaqaale ee dadka waayeelka ah. Raadi xarun sare oo ay bartaan siyaabo kale in ay la kulmaan xubnaha waaweyn ee bulshadaada. Akhri wax dheeraad ah
Bisha kowaad ee America MyMy bisha ugu horeysay ee America ahaa mid aad u adag. Waxaan lumay, jahwareer, iyo cabsi. Anna, qaxooti ka soo Burma, qoray oo ku saabsan iyada Bisha kowaad ee America.
Baro Xuquuqdaada: sida si ay ula falgalaan fulinta sharcigaMa waxaad tahay afraif booliiska? Ogow xuquuqdaada! Sida oo degan Maraykanka, halkan jira arimo dhowr ah in aad ogaato marka aad la hadasho sarkaal booliis ah
Golaha vs Home: waa maxay faraqa u dhexeeya guriga iyo guriga?Golaha vs Home: Haddii uu qof ka shaqeeya adag oo waxaad ka samaysaa lacag aad u badan, ma ahan in ay adag tahay in guri iibsato. Laakiin guriga u baahan yahay in ka badan oo kaliya lacag.